Tobin-tsolika iray etsy Ankadindramamy: lasan’ny jiolahy nirongo fiadiana ny sakaosy feno vola | NewsMada
Par Taratra sur 23/07/2019
Efa faninefany amin’izao, araka ny fantatra, ny niharan’ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana ity toby fivarotan-tsolika etsy Ankadindramamy ity. Tao anatin’ny fotoana fohy, omaly, ny nandroban’ny jiolahy ny vola iray sakaosy saika harotsaka any amin’ny banky.
Nihorohoro indray ny mponina! Notafihin’ny jiolahy efatra nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika indray ny tobin-tsolika Shell eny Ankadindramamy, omaly tamin’ny 6 ora sy 30 mn maraina. Lasan’ireo jiolahy ny vola tamin’ny sakaosy nokasaina haterina any amin’ny banky. Vola “versement”-n’ilay tobin-tsolika ity saika haterina any amin’ny banky ity kanjo tonga tampoka ireo jiolahy. Araka ny fanazavan’ny iray amin’ireo mpiasa ao amin’ity tobin-tsolika ity, vao nikasa hiditra tao anaty fiara niaraka tamin’ny vola ny mpitantana ilay tobin-tsolika no notsenain’ireo olon-dratsy tamin’ny basy ka tsy afa-nihetsika intsony. Nalain’izy ireo an-keriny ny sakaosy nisy ilay vola sady nanapoaka basy ry zalahy. Rehefa azony ny vola, lasa nitsoaka nandeha an-tongotra nanaraka elakela-trano ry zalahy. Tsy afa-nanao na inona na inona kosa ireo mpiasa eo amin’ny tobin-tsolika manoloana ny fitaovam-piadiana teny am-pelatanan’ireto jiolahy. Nihorohoro tanteraka ireo mponina eo amin’ny manodidina nandritra ny fanafihan’ireo jiolahy. Nohamafisin’ny fanazavan’ireo mpiasa ao amin’ity tobin-tsolika ity hatrany fa tsy nisaron-tava ireo olon-dratsy ary efa faninefany amin’izao ny nitrangana fanafihan-jiolahy ity tobin-tsolika ity. Marihina fa misy mpamongady zava-pisotro eo akaikin’ity tobin-tsolika ity izay efa indroa notafihin’ny jiolahy nitondra basy ihany koa.
Lasibatra indray ny tobin-tsolika…
Tsikaritra tato ho ato ny fahasahian’ireo jiolahy manao fanafihana amin’ny maraina sy amin’ny antoandrobenanahary. Tsy misy hotafihina rahateo intsony koa ry zalahy ka mitondra faisana avokoa izay tratra. Tsiahivina fa notafihin’ny jiolahy nirongo fitaovam-piadiana toy izao koa ilay mpiasan’ny tobin-tsolika iray eny Anosiala Ambohidratrimo, ny volana mey 2019 lasa teo, raha nitondra vola 30 tapitrisa Ar “versement” haterina any amin’ny banky any Mahitsy. Nandeha moto izy ka teo Manakambahiny Ambohidratrimo no notifirin’ireo jiolahy teny ambony moto. Maty tsy tra-drano izy ary efa nisy amin’ireo mpiara-miasa aminy nanaovana famotorana tamin’ity raharaha ity. Teo koa ny fanafihan-jiolahy ny tobin-tsolika iray eny Ankorondrano, ny volana jona 2019 teo. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany koa ny vola tany amin’ireo mpiasan’ilay tobin-tsolika ary tsy vitan’izany fa mbola nalain’izy ireo koa ny vola tamin’ireo “clients” haka solika teo amin’ilay tobin-tsolika. Mitaintaina andro aman’alina ny mponina amin’ny tsy fandriampahalemana. Tsy kely lalana ny mpanao ratsy ary hita fa mihamivoatra hatrany koa ny paikadin’ireo jiolahy sy/na misy koa ny firaisana tsikombakomba amin’ireo mpiasa eny amin’ireny tobin-tsolika ireny matoa fantatry ny jiolahy fa hoe hanatitra volabe any amin’ny banky ny mpiasa ao amin’ilay tobin-tsolika?
Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana momba ity fanafihana ny tobin-tsolika eny Ankadindramamy ity.